Waftigii Madaxweynaha iyo Ra'iisul Wasaaraha oo Gaarey Boosaaso
Halkan ka Eeg: Sawirada Soo dhoweyntii waftiga....
Waxaa maanta Isku soo bax aad loo soo Abaabulay oo lagu soo Dhawaynaayo Madaxweynaha DFKG Soomaaliyeed iyo Raysal wasaaraha DFKG Soomaaliyeed ay ka Dhacday Magaalada Boosaaso ayadoo ay ka soo Qayb galeen Dadweynaha Ku nool Boosaaso oo isugu jira Bulshada iyo Ardayda Iskoolada Boosaaso iyo Jaamacada Bariga Afrika ee Boosaaso, Waxaa kaloo soo Dhaweyntaa ka soo Qayb galay Caruur iyo Ciroole.
Madaxweynah iyo Raysal Wasaaraha DFKG Soomaaliyeed ayaa socdaalkooda ay ku soo mareen Magaalada Boosaaso waxaa uu ka mid ahaa socdaal ay ku soo mareen Magaalooyin ku yaal Soomaaliaya oo ay ka mid yihiin Jawhar, Baladweyn, Garoowe, iyo Boosaaso, Baydhabo.
Waftiga Madaxweynaha ayaa waxa uu socdaal ku soo Maray Magaalooyinka Qardho oo Saaka uu ka soo Quraacday iyo Magaalada Carmo oo uu Booqday Dhisme Iskuul Booliska oo laga dhisay Carmo.
Madaxweynaha ayaa sheegay in Socdaalkaan ay ku marayaan Soomaaliya ay hor dhac u yihiin Dawlada oo u soo Guuri doonta Soomaaliya.
Madaxweynaha iyo Raysal wasaaraha ayaa laga Yabaa in ay ka Hadlaan Fagaaraha Boosaaso iydoo Xaflad lagu soo dhaweynayo loogu dhigi doono Tiyaatarka Dowlada Hoose.
Sawirada Soo dhoweyntii waftiga....
Beesha Hawiye oo Kulankoodii Maanta Ka Soo Saaray Go'aamo
Xubnaha Labada Gole ee DFKMG ee Beesha Hawiye ayaa shir Sedex cisho Socday ka dib waxay soo saareen shan qodob oo ay beesha wada saxiixday oo uu kamid yahay qodob ah "In caasimadda ay ka saaraan maliishiyaadka iyo hubkooda." Guji Feb 27
Maxkamada Somaliland oo Go'aan Ka Gaadhay Dacwada Doorashada Golaha Wakiilada
Xeer ilaaliyaha guud ee Somaliland ayaa dacwad uu sooqoray madaxwayne rayaale oo ... Guji... Feb 27
Sidaas waxaa yiri afhayeenka isbahaysiga dooxda jubba oo ay SomaliTalk maanta ku waraysatay Kismaayo.. Guji...